Marble Mozis - Morningstar Stone Co., Ltd.
3D Wapụtara Nkume-Wall & Art
Marble Water-ugboelu Inlay
Ngwongwo marble-Isiokwu & Art
Kọlụm & Post
Agba akwụkwọ ndụ
Nzọụkwụ a bụ isi ma dịkwa oke mkpa maka usoro niile a. Nkume cubic blocks na slabs na-ekesa ihe akụrụngwa dị njikere maka nhazi. Nhọrọ nke ihe ndị ahụ ga-achọ ịmara ihe nhazi nke ihe odide na ngwa na uche dị njikere maka ịmụ ihe ọhụrụ ọ bụla. Nnyocha zuru ezu nke akụrụngwa gụnyere: nyocha ndekọ na nyocha ihu anụ ahụ. Naanị usoro nhọrọ ahọpụtara n'ụzọ ziri ezi, ngwaahịa ikpeazụ nwere ike ikpughe ọmarịcha mma na ngwa ya. Ndị otu anyị na-azụ ahịa, na-agbaso ọdịbendị ụlọ ọrụ nke imepụta naanị ngwaahịa dị mma, maara nke ọma n'ịchọta na ịzụta ihe dị mma. ▼
Nkọwapụta nke ụlọ ahịa-ịbịaru / imewe
Otu ndị nwere ọgụgụ isi nwere ike iji ụdị ihe osise dị iche iche na ihe ọmụma dị mkpa na-emepụta ọdịiche dị n'etiti anyị na ọtụtụ ndị asọmpi ndị ọzọ. Anyị bụ ndị dị njikere mgbe niile maka àjà ọzọ kachasị ngwọta maka ihe ọhụrụ ọ bụla imewe na echiche. ▼
All okokụre ngwaahịa na-chọrọ ime tupu-ezukọta tupu ahapụ n'ichepụta osisi, si mfe ịkpụ-to-size ogwe ka CNC pịrị ụkpụrụ na mmiri-ugboelu nakawa etu esi. A na-ekwukarị usoro a dị ka akọrọ. A na-eme ntụpọ kwesịrị ekwesị na-emeghe na oghere na-enweghị ihe ọ bụla na akwa akwa cushion dị nro na ala na ọnọdụ ọkụ dị mma. Ndị ọrụ anyị ga-atọgbọ ngwongwo ngwụcha ngwaahịa n'elu ụlọ dịka shopdrawing, nke anyị nwere ike ịlele:
1) ma ọ bụrụ na agba ahụ na-agbanwe agbanwe dị ka mpaghara ma ọ bụ ohere;
2) ma ọ bụrụ na marble ejiri maka otu mpaghara nwere otu ụdị, maka okwute nwere akwara, nke a ga - enyere anyị aka ịlele ma ọ bụrụ na agbanye akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ na - aga n'ihu;
3) ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla chipping na ihu na-agbasa iberibe ka a gbanwere ma ọ bụ dochie;
4) ma ọ bụrụ na e nwere mpempe akwụkwọ ọ bụla nwere nkwarụ: oghere, nnukwu ntụpọ ojii, na-acha edo edo nke kwesịrị ịgbanwe. Mgbe enyochachara ogwe niile na akara. Anyị ga-amalite mbukota usoro. ▼
Anyị pụrụ iche mbukota nkewa. Site na ngwaahịa osisi na osisi plywood na ụlọ ọrụ anyị, anyị nwere ike ịhazi mbukota maka ụdị ngwaahịa ọ bụla, ma ọ bụ ọkọlọtọ ma ọ bụ na-adịghị mma. Ndị ọrụ ọkachamara na-akwakọ ngwaahịa maka ngwaahịa ọ bụla site na ịtụle: oke ibu dị na ngwugwu ọ bụla; na-mgbochi skid, mgbochi nkukota & shockproof, waterproof. Nchekwa na nchekwa nke ọkachamara bụ nkwa maka inyefe ngwaahịa maka ndị ahịa emechara. ▼
110lọ 1103, Buildinglọ B, Hengyuan Elite Mansion 1985, Mupu Road 101, Huli District, Xiamen, China